Samsung i5700 Galaxy Spica ayaa timid Spain | Androidsis
El Samsung I5700 Galaxy Spica Isbaanishku waxay si rasmi ah u timaaddaa dukaanka taleefanka ee House House waxaana laga heli karaa bilaash oo laga kabi karaa hawlwadeennada. Tani waa tan labaad Xarunta Android guriga Samsung iyo inkasta oo xoogaa farsamo ahaan ay ku kala duwan yihiin walaalkiis Samsung Galaxy I7500 dibedda waxay isku dhowyihiin isku mid.
Waxaan horeyba u tijaabin jirnay taleefankan maalmo kahor waxbadanna waan kaaga sheegay unboxing sida iyaga Faahfaahin farsamo. Dukaanka aan kor ku soo sheegnay waxaad ku heli kartaa bilaash € 279 laakiin haddii aad ku rabto kaabis waxaa laga heli karaa Orange iyo Yoigo. Midka hore, waxaad ka heli kartaa € 69 illaa ugu badnaan € 239 iyadoo kuxiran nooca qandaraaska iyo haddii ay tahay mid la qaadi karo, socdaal ama diiwaangelin cusub. Iyadoo Yoigo ay qiimaheedu noqon doono € 169 ama € 189.
Astaamaha ugu caansan waa processor-kiisa 800 mhz, shaashadda capacitive-ka ee 3,2-inch Amoled iyo xallinta 320 × 480 pixels, labada Wi-Fi, Bluetooth, isku xirnaanta GPS iyo awood u leh inuu ciyaaro faylasha Divx.
Terminal weyn oo laga galo Nidaamka Android iyo in qiimaheeda uu noqon karo mid duufsan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Samsung » Samsung i5700 Galaxy Spica ayaa timid Spain
Badeecadu waxay timaaddaa Android
Gen.Y DualBoot wuxuu ku siiyaa labo boot boot qalabkaaga Windows